ပန်ဒိုရာ: လွယ်အိတ်ကလေး လွယ်ကာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း
Posted by pandora at 12:13 PM
အေးဗျာ ကျနော်လည်း လွယ်အိတ်ချစ်တယ်ဗျ။ ကျနော့်ကချင်လွယ်အိတ်လေးရယ် နာမည်ထိုးထားတဲ့လွယ်အိတ်အစိမ်းလေးရယ် ကျနော်ကြိုက်တဲ့ လွယ်အိတ်အဖြူရောင်လေးရယ် ဒီနေ့တော့လွမ်းသွားပြီဗျာ...
ပန့် လွယ်အိတ်လေးကတော့.. . ငွေမောင်းသံလေးတွေနဲ့မို့.. သွက်သွက်လက်လက် ကလေး.. အသံပေးနေမှာပေါ့။ အနဲဆုံး..အဲဒီ ပြတင်းပေါက်က..လေတပွေ့ တိုးဝင်လာတိုင်း..ခမ်းစည်း စ နဲ့အတူ..အသံချွင်လေး တစ လောက်..ပေးရင်း..သူရှိကြောင်း..သတိပေးနေမယ်ထင်တယ်။
အစ်မရေ..ငယ်ငယ်တုန်းကဆို လုံချည်ကိုခြေမျက်စိတယဉ့်တိုက်ဝတ်၊ကချင်လွယ်အိတ်လေးကို လက်ကဆွဲပြီး ပဲထုတ်ခဲ့တာလေးတွေ ပြေးသတိရမိတယ်။ညီမ့ အစ်မလဲ လွမ်းနေတယ်ထင်ပါ့။
ဒေါ်လေးရေ့ လွယ်အိတ်ကလေးကိုသနားရင်း လှလိုက်တဲ့ အရေးဖွဲ့လေးကို ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ရတဲ့အထိပဲ ဒါကျနော်တို့ လုံးဝမတွေးမိ ပစ်ပယ်ထားမိ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ထားမိတဲ့ အပယ်ခံလေးရဲ့ ဘ၀ပဲ သူကသက်မဲ့မို့တော်သေးတယ် သက်ရှိသာဆို...............................။
ငယ်ငယ်က ကချင်လွယ်အိတ်လေးကို ထုံးပြီးလွယ်ခဲ့တာ သတိရတယ်.. ငယ်ငယ်တုန်းကပါ.. နောက်တော့လုံးဝ လွယ်အိတ်ဆိုတာ လှည့်ကိုမကြည့်ဖြစ်ခဲ့တော့တာ..
ခါးညွှတ်အောင် သယ်ပြီး ကျောင်းသွားကြတာပဲ
လူတွေရဲ့လွယ်အိတ်ဆိုတာက သရေပေါ်မှာ အရိုးခေါင်းတွေ၊ ဒီဇိုင်းခပ်ရဲရဲ ပုံတွေလေ
ရောင်းသူသည် ၀ယ်သူရှိရာသွား လေ့ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စကားအရဆိုရင်တော့
နယ်တွေမှာတော့ လွယ်အိတ်လွယ်တဲ့ လူတွေအများကြီးရှိနေသေးတာ ကောင်းကွက်တစ်ခုထင်ပါရဲ့ နော်
ကျွန်တော်တော့ ငယ်ငယ်က မွှေးပွလွယ်အိတ်တွေ အမွှေးလိုက်နှုတ်တာ၊ အချင်းချင်း လွယ်အိတ်အမြီးတွေ ချည်ပေးကြတာ၊ ပီကေ နဲ့ ကပ်တာတွေ ပြန်သတိရမိတယ်။ ဟီးဟီး။
လွယ်အိတ်လေးကို ထွေးပွေ့ ကာ
အကြင်နာရဆုံး မင်းကလေးရဲ့စေတနာ...
ပိုင်ရှင်စစ်ရဲ့လက်ထဲမှာ တသက်လုံး မခွဲမခွာ ရှိနေပါစေ...
သဇင်လည်း လွယ်အိတ်ကို သိပ်ချစ်တာ
၆ တန်းတုန်းက အစ်ကိုအကြီးဆုံး ဝယ်ပေးတဲ့
ကြံတိုင်းအောင် တံဆိပ် အဖြူအမည်းကြားထားတဲ့
လွယ်အိတ်လေး အခုထိ ဗီရိုထဲသိမ်းထားတုန်းပဲ
လွယ်အိတ်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ခေတ်အလိုက် ပြောင်းလွယ်ကြသေးတယ်။ ကျော်သူက ကြိုးထုံးပြီးလွယ်တယ်။ ခါးပိုက်နှိုက်ရန်က မလုံခြုံပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ လွယ်အိတ်လေးကို လက်နဲ့ဆုပ်ထားရရင် အားရှိသလိုပဲ။
လွယ်အိတ်လေးအကြောင်းဖွဲ့ထားတာ သိပ်လှတာပဲ။ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက လွယ်ခဲ့တဲ့ လွယ်အိတ်ကလေးတွေကို သတိရသွားတယ်။
ကျွန်မလည်း လွယ်အိတ်ကလေးတွေကို ချစ်တယ်။
ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတလျှောက် လွယ်အိတ်လေးတွေကိုပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုးလွယ်ခဲ့တာ။ လွတ်လပ်ပေမဲ့ မလုံခြုံတာတော့ အမှန်ပဲ။ ကျွန်မလည်း လွယ်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ခါးပိုက်နှိုက်ခံရဖူးတယ်။
မူလတန်းဘ၀ကိုတောင် ပြန်လွမ်းမိပြီး(
ကချင်လွယ်အိတ်အသေးလေးတွေ ပေါ်လာတုန်းကလည်း အမြတ်တနိုးဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကဗျာတွေလည်း အဲ့ဒီလွယ်အိတ်လေးထဲမှာ ပွယောင်းခဲ့ဖူးတယ်။
ကလေးဆို တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကတောင် ကချင်လွယ်အိပ် အနီလေးနဲ့ မောင်းလေးတွေနဲ့ ... ကချင်လွယ်အိပ်ကိုပိုကြိုက်တယ် .. ပြီးတော့ လွယ်အိပ်လွယ်ပြီးကျောင်းတက်ရတာ ကျောင်းသားပိုဆန်တယ်
ကျနော်ကတော့ ရှမ်းလွယ်အိတ် ပိုကြိုက်သဗျာ...
သူက ပိုကြီးတယ်လေ.. စာအုပ်အတော်များများဆန့်တယ်လေ.. ကလေးတုန်းကဆို လွယ်အိတ်ကို ကျောပိုးအိတ်လို လုပ်ပြီး မိုးရွာထဲပြေးရတဲ့ ဖီလင် အမှတ်ရတယ်
ရှေ့ကပို့စ်တွေတုန်းက ကွန်းမန့်မရေးဖြစ်ပေမယ့် လွတ်အိတ်လေးကျတော့ ရင်ထဲတစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားလို့ ရေးမိတယ် အစ်မရေ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်လည်း လွတ်အိတ်လေးကို အခုထိ လွယ်နေတုန်းမို့ပါပဲ။
တခြားအိတ်မျိုးစုံ ကိုင်ဖြစ်ပေမယ့် လွယ်အိတ်လေးတွေမှာ ကျောင်းသားဘ၀ရဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေပါတာမှု ပိုလွမ်းစရာ ကောင်းပါတယ် အမရေ။ ခုတလောတောင် ကချင်လွယ်အိတ်လေး ပါမလာလို့ အိမ်ကို ပြန်မှာမလို့ စဉ်းစားနေမိတာ။ ခု ပိုလွမ်းသွားပြီ။
အင်း.... လွယ်အိတ်ထဲကို... ထည့်ခဲ့ဖူးတဲ့... ဖက်ဖူးရောင် ဘ၀လေးတခုကို... ပြန်လွမ်းသွားတယ်...။
ခုတော့လည်း... ... ...
လွယ်အိတ်လေးကို လာခံစားပါတယ် အန်တီပန်ရေ။
ပုံရိပ်လဲ လွယ်အိတ်လွယ်ကာ လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက် ချင်ပါသေးသည်။
ဘလော့အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ အကဲဖြတ်ဒိုင်တွေ ဘယ်သူဆိုတာ သိမှ ဖြစ်မှာ။နအဖအကယ်ဒမီပေးပွဲကဒိုင်လူဖြီးတွေရွေးတဲ့အကယ်ဒမီစာရင်းလို ပေါ်လစီဖြစ်မှာစိုးပါတယ်။
နစ်နေမန်း။ကိုထိုက်တို့ လို ရွှေဝါေ၇ာင်ကာလ ထင်၇ှားခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို မဲစာရင်းထဲ ဘာလို့ မထည့်ခဲ့လဲ၊ဖြေရှင်းချက်ပေးပါ ဒိုင်များ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ လွယ်အိတ်က ကျောပိုးအိတ်တွေထက် ပိုခန်းနားတယ်လို့ ခံစားရတယ်..။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကချင်လွယ်အိတ် အနက်ရောင်လေးပဲ...။ ကျွန်တော် အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အဲ့ဒီ့ ပုံစံပဲ အမြဲသုံးခဲ့ဖူးတယ်...။ :)
မပန်.. ယုံမလားတော့မသိဘူး..။ လေးမ ပုခုံးမှာ ဒီနေ့ ထိ လွယ်အိတ်ရှိနေသေးတယ်..။ လွယ်အိတ်နဲ့ တော်တော်ဆင်တဲ့ အိတ်ပေါ့..။ ပကာသနမပါဘူး..။ အဟန့် အတားမပါဘူး..။ ဟောင်းလောင်းပေါက်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို မကြာခဏ စမ်းရင်း...။ အိတ်တွေ ဖွင့်ပြတဲ့ tag game တုန်းက လေးမ အိတ်တင်ထားတယ်..။
လွယ်အိတ်လေးတွေကို အရင်တုန်းထဲက မြတ်မြတ်နိုးနိုးလည်းလွယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မပန်ဒိုရာ ရဲ့ အတွေးအရေးကြောင့်လွယ်အိတ်လေး ရဲ့ အရေးပါပုံတွေကို သတိပိုထားမိခဲ့ပြီ။ အမေပို့ထားတဲ့ကချင်လွယ်အိတ်လေးကို ဒီတခါ အပြင်ထွက်ရင်ထုတ်လွယ်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။ ဒီတခါတော့ နံဘေးနားမှာ အဖော်ကောင်း တယောက်အဖြစ်နဲ့သေသေချာချာ ဂရုထားပြီး လွယ်ဖြစ်တော့မယ်။
နောက်ကျောမှာ ကားယားခွပြီး လိုက်တဲ့ သူတွေထက်
ဘေးနားကနေ ရီးလေးခိုလိုက်တဲ့ သူ့ကို ပိုချစ်တယ်ဗျာ
When i go back to my dorm this evening, I gonna find my old Ka chin bag in my luggage and I wanna use it tomorrow. Oh, I am so sorry, I am missing u now, my bag.
ဘ၀မှာ ... ရှေ့ကသွားတဲ့ တုတ်ကောက်၊ နောက်က လိုက်တဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထက်၊ ဘေးနားမှာ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်တဲ့ လွယ်အိပ်လေးတစ်လုံးကို အခုထိ လွယ်လျက် ဘ၀ခရီးဆက်နေလျက်ပါ ........။
လွယ်အိတ်က မြန်မာရနံ့ထက် ရိုးရာ ကချင်ရနံ့ပို သင်းပျံ့မယ်လို့ ကချင်ကြီး ထင်ပါတယ် ပန်ဒိုရာစံ.. လွယ်အိတ် ကိုင်ဆွဲသူဆိုတာ တကယ်တော့ ဗမာသမိုင်းကို ကောင်းကောင်း ကိုင်လှုပ်ခဲ့သူ တွေဗျ။
ရေးသွားတဲ့ မှတ်ချက်တွေ အားလုံးက လွမ်းစရာ ပိုကောင်းနေပါတယ်။ လွယ်အိတ်ကလေးကို သတိရသွားတယ်ဆိုလို့ လွယ်အိတ်ကလေး ကိုယ်စား ၀မ်းသာပါတယ်။
ကိုဒူကဘာရေ ကချင်လွယ်အိတ်လေးဆိုရင် လူတိုင်း ချစ်ကြတယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လွယ်အိတ်လေးက အမှတ်ရစရာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မရှိ ရိုးသားနေတုန်းပါဘဲ..
ကျွန်တော်တို့ကတော့ တော်ရာမှာ ထားထားလိုက်တာ ကြာပေါ့...
အသစ်အသစ်သော ဟန်ကြီးပန်ကြီး အိတ်တွေလွယ်လို့လေ